किन दिन्छन् रोनाल्डो आफ्नो प्रेमिकालाई महिनाको ८० हजार डलर ? – Talking Sports
किन दिन्छन् रोनाल्डो आफ्नो प्रेमिकालाई महिनाको ८० हजार डलर ?
बैवाहिक बन्धनमा नबाधिए पनि जोर्जिना रोद्रिगेज क्रिस्टियानो रोनाल्डोको साँच्चै ख्याल राख्छिन् र रोनाल्डो पनि आफ्नो सफलताको श्रेय उनलाई नै दिने गर्छन् । स्वतन्त्र महिलाको छवि बनाएकी जोर्जिनालाई रोनाल्डोले हरेक महिना ८० हजार अमेरिकी डलर दिने गर्छन् । कित त ?
रोनाल्डो र जोर्जिना ‘लिभ–इन रिलेसनसिप’ मा रहेका छन् । त्यही कारण रोनाल्डोले उनलाई ८० हजार डलर प्रति महिना दिनुको तीन कारणहरु छन् । एक हो उनीहरुको चार बच्चाको रेखदेख, दैनिक खर्च र जोर्जिना आफ्नै व्यक्तिगत खर्चका लागि ।
जोर्जिनालाई कुनै संकट नपरोस भनेर रोनाल्डोले देखाएको माया साच्चिकै तारिफ योग्य छ । तर जोर्जियालाई भने रोनाल्डोसँग पैसा माग्नुपर्ने आवश्यकता नै छन् । उनी आफै एक मोडल हुन् ।
व्यक्तिगत रुपमै हेर्ने हो भने जोर्जिनाको कमाइ निकै ठूलो छ । उनी आफ्नो इन्स्टाग्रामको एक पोस्टबाट नै ८ हजर ५ सय डलर कमाउछिन् । उनले फेब्रुवरी २०२० मा मात्रै उनले २० पोस्ट गरेकी छिन् जसको मतलब उनेले त्यो एक महिनामा मात्रै १ लाख ७० हजार डलर कमाएकी थिइन् ।
जोर्जिना इन्स्टाग्रामबाट मात्र हैन एक अन्तर्वार्ता दिए पनि पैसा लिन्छिन् । उनी एक अन्तर्वार्ताको १ लाख ५ हजार डलर लिन्छिन् । महिनाको तलाब पनि गन्ने हो भने उनी मनग्गे आम्दानी गर्छिन् । उनी रोनाल्डोलाई उपहार पनि दिरहेको हुन्छिन् ।
“तिमी एक सफल आमा र राम्री महिला हौ, तिमीलाई धेरै माया,” रोनाल्डोले इन्स्टाग्राममा पनि पोस्ट गरेका थिए । रोनाल्डोले एक छोरी मात्र जोर्जिनाबाट जन्माएका हुन् तर उनले आफ्नै अन्य तीन जना बच्चाहरुलाई पनि आफ्नै सन्तानसरह मायन गर्ने गरेकी छिन् ।
धेरै गल्फ्रेण्डहरु बनाइसकेका रोनाल्डो जोर्जिनालाई भने असिमित माया गर्छन् । रोनाल्डोले जोर्जिनाको लागि आफ्नो इक्षाको पनि त्याग गरेका छन् । उनले आफ्नो पोर्चुगलमा भएको सम्पत्ति आफ्नो आमा पछी जोर्जियाकै नाममा गरेका छन् ।